Wararka Maanta: Axad, Feb 9 , 2020-Muuse Suudi: Senatorada Puntland cadaalad darro awgeed ayay uga baxeen shirka aqalka sare
Muuse Suudi waxa maqnaashaha wakiilada Puntland ku tilmaamay mid aan indhaha laga saaban karin loona baahan yahay in wax laga qabto waxa dhaliyay carradooda.
“Saakay Puntland way joogeen hadana hal mid kama fadhiyo shirka. Waxay ka tageen shaqo xumada maanta socota,” ayuu yidhi Senator Muuse Suudi.
Illaa iyo hadda senatorada Puntland kama hadlin sababta ay uga baxeen hoolka aqalka sare iyo cadaalada darrada ay tabanayaan.
Hase yeeshee, bixitaankooda ayaa la aaminsan yahay inuu qeyb ka yahay khilaafka Puntland iyo dowladda federalka Soomaaliya oo meel xasaasiya maraya.
Madaxweyne Deni ayaa codsi u diray dhammaan wakiilada Puntland dowladda federalka inay 15- bisha saddexaad kasoo qeyb galaan shir wadatashi ah oo looga tashanayo masiirka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya.